TTSweet: ကျွန်မတို့ မိန်းမတွေရယ်
Posted by T T Sweet at 12:08 PM
Nay Nay Naing November 15, 2011 at 12:27 PM
နောက် ၅ မိနစ်နေသောအခါ....
ဖုန်းပြန်ခေါ်လား မခေါ်လားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားမိတယ်..
Thandar Lwin November 15, 2011 at 12:52 PM
စားချင်လိုက်တာ အမ ရယ် ...
ငါးောက်ာလေးရော မပါဘူးလားဟင် ...
ဦးညက်ခုံးရှူံ့ကြီး ကို အဖေ လို့ ခေါ်တာလား ..ဒါဆို ဂျူဂျူ ကလဲ အဖေ လို့ ဘဲ ခေါ်တာပေါ့ ဒက်ဒီ မခေါ်ဘူးပေါ့ ။
Very nice post. Make me laugh while reading :)
တီဆွိရယ်..ပို.စ်တခုလုံးဖတ်လာတာအကောင်း၊ ဟင်းချက်တာတွေရေးထားတာလဲ ဖတ်ရတာစိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်း၊ မစနာဝတ်ထု ဖတ်နေရသလိုမျိုးဘဲဆိုပြီးတော.၊ အောက်ဆုံးနားရောက်တော.မှ ၀ါးလုံးကွဲ ရီလိုက်ရတာဆိုတာ။
Q-te November 15, 2011 at 1:57 PM
တီဆွိ....တို့က အဲလို ချစ်တာနော်
နံနံပင်ခတ်လဲ အဖေကြီးကို သံသယ၀င် ငရုတ်သီး စပ်လဲ အဖေကြီးကို သံသယ၀င်
ဆားနှစ်ခါ ခတ်မိရင်တော့ အဖေကြီး ဆွိလေး သွေးတွေ တိုးနေပြီး ပြောရင်ဆိုးရင် ခေါင်းတွေတောင်မူးလာပီ ညန်ညန် ကျန်လာခဲ့ အဲ့ အဲ့ အဲ့ ........Qt.... ဘာမှ မကျောဝူးနော် ကွန်မန်းပဲ ပေးတွားတာာာ.. :)
;) နောက်ငါးမိနစ်ဖုန်းပြန်ခေါ်တဲ့း) ချစ်ရှာတာ
ဖိုးတုတ် November 15, 2011 at 2:07 PM
အမှန် ဦးခြိမ့်ဖုံးဆက်ရမဲ့အချိန်က ရုံးဆင်းခါနီး၊ ဆွိလေးရေ လှအောင်ပြင်ထားကွာ ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာ ...
ချဉ်ပေါင်ဟင်းက စားချင်စရာကြီး၊ နံနံပင်ကို ချဉ်ပေါင်ဟင်းထဲကိုထည့်တာ ခုမှပဲကြားဖူးတယ် ၊ တကယ်ကောင်းလား၊ စမ်းကြည့်ဦးမယ်၊
mstint November 15, 2011 at 3:41 PM
ချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း ထမင်းမြိန်လိုက်မယ်ဖြစ်ခြင်း စွိတီရေ။
တီတင့်အိမ်မှာ ဒီကနေ့ကြက်-ဘူး ကာလသားချက်ဆိုတော့ စွိတီရဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း ယူသွားပြီး) ကျေးဇူးပါ။
susu November 15, 2011 at 3:50 PM
မဒမ်ကိုး November 15, 2011 at 3:56 PM
တကယ်ကိုအော်ကိုရီသွားတယ် တီဆွိရေး)
Anonymous November 15, 2011 at 5:08 PM
ချဉ်ရေဟင်းရော ငရုတ်သီးထောင်းရော စားချင်တယ်ဗျို့။
NNYM November 15, 2011 at 6:44 PM
မြသွေးနီ November 15, 2011 at 7:10 PM
အစ်မဆွိရဲ့ မျက်ခုံးရှုံ့ကြီးကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်ရမှာနော်..။ သူတို့ယောကျာ်းတွေက မိန်းမမာယာသဲကိုးဖြာလုပ်တယ် ထင်နေကြတာ..။ အမှန်က အဆိပ်မိရင် အချိန်မှီ သိရအောင် ဆက်ခိုင်းတာပါနော်...။
Baby taster November 15, 2011 at 9:52 PM
နေနေ ပြောသလိုပဲ ဖုန်းပြန်ဆက်လားဟင်
ထင်ပါတယ်လေ မဆက်ဖူးလို့း)
blackroze November 15, 2011 at 9:57 PM
5 မိနစ်နေသောအခါ ဖုန်းပြန်ခေါ်လာပါသလား
ဆက်လက်ပြီး Post တင်ပေးပါအမ ဆွိ
T T Sweet November 15, 2011 at 10:18 PM
အောင်မလေးရယ်တဲ့မှ ဇာတ်သံနှောကာ ပြောရရင်ဖြင့် .............. နောက်၅မိနစ် နေသောအခါ ...
(အောက်ဆုံးက ကွင်းစ ကွင်းပိတ်နဲ့ ရေးတဲ့ စာထဲမှာ အဖြေက ပါပြီးသားလေ ပိတ်သတ်တို့ရေ ...)း)
အင်း အမရေ နံနံပင်က ဘာလို. ညှိုးနေတာတဲ.လဲ.. မနက်တိုင်းရေလောင်းရဲ.သားနဲ. .. အဲဒါအဖြေရှာမှဖြစ်မယ်.. :)
yee ya tal:)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 16, 2011 at 3:46 AM
အစ်မဆွိရေးတဲ့ ပိုစ့်တိုင်းကို သဘောကျတယ်..
စာရေးသိပ်ကောင်းတာဘဲ လူတွေကို စိတ်ဝင်စားအောင်လည်း ရေးတတ်တယ်
ဒါနဲ့ စကားပြောတဲ့ တစ်နေရာမှာ ဆွိလေးလို့ ဖတ်လိုက်မိပြီး အားတွေကျသွားတယ် ဟိဟိ..
အမရယ် .. စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်လာတာ.. ဘာကြောင့်များ စပ်ပါလိမ့်လို့..
နောက်ဆုံးတော့ ရယ်လိုက်ရတာ :))
Vista November 16, 2011 at 1:28 PM
တေမှ တော့ ဖုန်းကိုင်နိုင်ပါတော့မလား မကိုင်နိုင်တော့တဲ့ တူတူ ညနေရုံးဆင်းမှ ရှင်းပစေ ခွီး။
ထပ်ဖတ်ပြီး ထပ်ရယ်သွားပါသည်။း)
T T Sweet November 16, 2011 at 1:32 PM
အဟော်... သူများသေမဲ့ ကိစ္စကို ၂ခါတောင် လာဖတ်ပြီး ၂ခါလာရယ်သွားသူက ရှိသေး ...
( နောက်တာနော် လီယို တို့က လာလေ ကြိုက်လေ ...း)
Nilar November 17, 2011 at 12:36 AM
တစ်ယောက်တည်းရီရတာအားမရသောကြောင့် ယောကျာ်းကိုပြောပြပြီး ထပ်ရီလိုက်ပါတယ်..ဒီနေ့ထပ်လာပြီးထပ်ရီသွားပါကြောင်း...
မေသိမ့်သိမ့် ကျော် November 17, 2011 at 7:08 AM
ခစ်ခစ်။ တော်သေးတာပေါ့။ တော်တော်လန့်သွားမယ်။
စန္ဒကူး November 17, 2011 at 6:04 PM
ဖြစ်ရလေ တီဆွိရယ်.. ရီလိုက်ရတာ.. တအား...ဘဲ..
ဘယ် email address ကိုဆက်သွယ်လို့ ရပါမယ်
T T Sweet November 18, 2011 at 5:56 PM
sweetee2008@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိူင်ပါတယ် ဇွန်ဇွန်ရေ။
တီတီဆွိ စာရေးအလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဆရာမဘ၀ စာသင်ခန်းထဲကအတွေ.ကြုံတွေလည်း အဆင်ပြေရင်ရေးပါနော်။
rose of sharon November 20, 2011 at 11:41 AM
ဖြစ်ရမယ်မရယ်.... ရီလိုက်ရတာ ညစ်နေတဲ့စိတ်လေးတွေလန်းသွားတယ်...
ရယ်လိုက်ရတာ တီဆွိရယ် ..
ဦးခြိမ့်နဲ့ တီဆွိပုံ မျက်စိထဲ မြင်ယောင်ပြီး တယောက်ထဲ ရယ်နေရတယ် ဟီးးး
San San Htun November 24, 2011 at 1:12 PM
ဖြစ်ရလေ တီဆွိရယ်..စဉ်းစားလိုက်ရတာ နံနံပင်က ဘာကြောင့် စပ်သလဲလို့ ... :P
Myanmar Online Music November 24, 2011 at 7:04 PM